नयाँ यात्रा स्थानीय सरकारसंग – Mukhundo.com
mukhundo.com, २०७६ भदौ २३ सोमबार
काठमाडौँ । अहिले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा धेरै राम्रा र नराम्रा कुराहरु आइरहेका छन् । पत्रकारिताको मुलधार र अलगधारका धेरै मतहरु अहिले बजारका चिया पसल, चोक र गल्ली गल्ली तथा गाउँका मेलापात र चौतारीमा बहस चलिरहेको पाइयो ।
शिर्षक बन्ग्याउन निकै गाह्रो हुने, बढाई चढाई कुरा राख्नै नसक्ने फिचर फोटोलाई आकर्षक र भ्युवर्स तान्न अनेकन शब्द प्रयोग गर्न नसक्ने । यी कुराहरुले गर्दा मलाई जति मूलधारको पत्रकारिता गर्न गाह्रो भएको थियो त्यो भन्दा सयौँ गुणा अप्ठेराे अहिले झेलिरहेको छु ।
काठमाडौँको कोलाहल वातावरणलाई छोडेर म गएको साउन तेस्रो साता रामेछापको यात्रामा निस्केको थिए । मेरो यात्राको अनुभवले पनि यही भन्छ अहिले नेपालमा पत्रकारहरुको बहस र पत्रकारहरुको भविष्य र उनीहरुको काम र चरित्रको बारेमा अनेकन व्याख्या गरेको पाइयो ।
मेरो अनुभव पनि झण्डै एक दशकको पत्रकारिता क्षेत्रमा छ । एउटा रेडियोको यात्राबाट सुरु भएको पत्रकारिता टेलिभिजन, अनलाईन हुदैँ अहिले युट्यूबसम्म आइपुगेको छ । तर पछिल्लो मेरो यात्रा चाँही म आफैलाई मन नपर्ने यात्रा हो । तर यसमा मैले मुलधारको यात्रालाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेको छु । युट्युबरको यात्रा भन्दा पनि पत्रकारिताको मूलभूत विषयलाई समेटेर युट्यूब पत्रकारिता गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु । तर सकिरहेको छैन भनेरै मैले नयाँ यात्राको थालनी गरिरहेको छु ।
त्यो यात्रा हो ‘मेरो सरकार मेरो काम’ यो सिरिजमा मैले नेपालका स्थानीय सरकारको कामको बारेमा जानकारी गराउने प्रयत्न हो । तर अहिलेको परिवेशमा यो यात्रामा पनि निकै चुनौती देखेको छु । स्थानीय सरकारले गरेको कामको बारेमा जानकारी नै नदिने दिए पनि पूर्ण जानकारी नदिने जस्ता कामले मेरो यात्रामा केही अप्ठेरो भईरहेको छ । यसमा स्थानीय सरकारले संचार माध्यमलाई सबै जानकारी दिन हुदैन निति अबलम्बन गर्ने गरेको पाइयो ।
किन दिदैनन् ?
यो प्रश्न मैले मात्र गरेको होइन । यो प्रश्न आम जनताको प्रश्न हो । तर यो प्रश्नको जवाफ चाँही किन दिदैनन् जनप्रतिनिधी वा स्थानीय सरकारका कर्मचारी ? यो विषयमा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र गहन अनुसन्धानमुलक समाचार संकलन र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नुपर्ने देखिन्छ । संचार माध्यम र जनतालाई किन स्थानीय सरकारको सबै काम र योजना तथा खर्चको विवरण दिन मान्दैनन् ।
यसमा स्थानीय सरकारले आफ्नो खर्चलाई लुकाई राख्ने प्रयात्न हो भन्न सकिन्छ । किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकाको खर्चको बारेमा पत्रकार विद्या राईले गरेको रिपोर्टिङले नै स्थानीय सरकारको खर्च र उनीहरुको सुचना चुहावट नगर्ने निति अवलम्बन गरेको हो यो प्रष्ट छ । तर सुचना नदिई सुख हुन्न स्थानीय सरकारलाई यो पनि उनीहरुमा बाध्यता छ तर केही रोक्ने प्रयास भने भईरहेको पाइयो । यस सम्बन्धमा अर्को लेखमा अझ प्रस्ट पारौँला ।
मूलधार पछ्याउनेले युट्यूबर बन्न गाह्रो
पछिल्लो समय युट्यूब पहिलो सुचना दिने माध्यम बनेको छ । यसमा दुई मत नहोला । तर युट्यूबमा समाबेश भएको समाचारको स्तरीयता, गुणस्तर र विश्वसणीतामाथि प्रश्न उठेकै हो । यो घाम जस्तै छर्लङग छ । तर म जस्ता मूलधारका पत्रकारिताबाट युट्यूबमा आउने पत्रकारका लागि चाँही पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैँ हुदो रहेछ ।
शिर्षक बन्ग्याउन निकै गाह्रो हुने, बढाई चढाई कुरा राख्नै नसक्ने फिचर फोटोलाई आकर्षक र भ्युवर्स तान्न अनेकन शब्द प्रयोग गर्न नसक्ने । यी कुराहरुले गर्दा मलाई जति मूलधारको पत्रकारिता गर्न गाह्रो भएको थियो त्यो भन्दा सयौँ गुणा अप्ठेराे अहिले झेलिरहेको छु । र अरु युट्यूबर जस्तै गरी शिर्षकलाई तोडमोड गर्ने प्रयात्न नगरेको होइन् ।
तर मलाई पत्रकारिताको आचारसंहिताले दिएन । तर यो धैर्य र आचार संहिता र नैतिकता भन्दा पनि अब विहान बेलुकाको छाक टार्न र भोको पेट भराउन अन्य युट्यूबरको यात्रालाई फलो गर्नुपर्ने बाध्यता मलाई पनि परेको छ । म उनीहरु जस्तै त बन्दिन तर मूलधारको पत्रकारितालाई नै फलो गर्ने प्रयत्न गर्नेछु ।
पत्रकारिताको यो क्षेत्रबाट बाहिरिने प्रयात्न गरिरहेको थियो । तर युट्यूबमा आएको सब्क्राइब र भ्यूजले मलाई युट्यूबको यात्रालाई तानिरहे । अनेकन शिर्षक र अनेकन उपाय गरेर भ्यूज तान्ने प्रयात्न भन्दा केही राम्रा काम गरौँ भन्ने सोचका साथ ‘मेरो सरकार मेरो काम’ को परिकल्ना गरे र यो यात्राको पहिलो चरणमा छौँ । तर निकै कठिन छ । तै पनि कठिन यात्राका बीचमा पनि यात्रा गर्न सकिने पत्रकारिताको मूलभूत यात्रालाई नै निरन्तरता दिने प्रयत्न सहित मध्यपूर्वबाट यात्रा गर्यौँ । यो यात्रामा तपाईको शुझाव र सल्लाहको अपेक्षाको आशा गरेको छु ।
Copyright September 9, 2019 Mukhundo.com Protected. All Rights Reserved.